क्रिकेटलाई साख जोगाउने चुनौती
रमेश दवाडी/नेपाली खेल क्षेत्रमा क्रिकेट सबैभन्दा प्रिय खेल बनेको छ । क्रिकेटले एकपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिस्तरको सफलता हासिल गरेर अघि बढिरहेको छ । युवा खेलाडी सन्दीप लामिछाने आईपिएलका लागि छनोट र एकदिवसीय मान्यता पाउनुले क्रिकेटमा उपलब्धिमा ऐतिहासिक फड्को मारेको छ । यु–१९ एसिया कप, यू–१९ विश्वकप, विश्व क्रिकेट लिगका विभिन्न चरण हुँदै सिनीयर टिमको विश्वकपसम्मको यात्रा र एकदिवसीय मान्यता पाउनु क्रिकेटले गरेका उपलब्धि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो । नेपालले एकदिवसीय मान्यता पाएपछि देश–विदेशबाट बधाई तथा शुभकामना आए । यसैबीच भारतीय चर्चित क्रिकेटर महेन्द्रसिंह धोनीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् बधाई र शुभकामना दिए । यो भनेको हामीप्रति छिकेकी चासो हो ।
त्यस्तै नेपालले एक दिवसिय मान्यता प्राप्त गरेपछि क्यानकी पूर्व सिईयो भावना घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमा क्रिकेट निकाय हेर्ने निकायनै नभएको प्रस्ट्याइन् । क्रिकेट मैदानको उदाहरण देखाएर उनले लेखिन–आजै बिहानै मात्र ग्राउण्ड स्टाफले फोन गर्नुभयो र भन्नुहुँदै तियो– म्याम ! टियू ग्राउण्डमा पानी छैन्, मैदान सुकिसक्यो । सबैलाई भनिसकें, कसैले वास्तै गर्दैनन् । नेपालको आजको उपलब्धिले हाम्रो भुँइमा खुट्टा छैनन्, टेष्ट राष्ट्रको गोरेटो अब तयार हुँदैगर्दा हाम्रो क्रिकेट हेर्ने निकाय खै ? पाँच चैतमा नेपाललाई एकदिवसीय मान्यता दिलाएर साथ स्वदेश फर्किएको नेपाल टोलीका अनुहारमा खुसी प्रस्ट देख्न सकिन्थ्यो । नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले यस पटक मात्र होइन, धेरै पटक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका छन् । तर, सरकार र आफूलाई क्रिकेटका स्टेक होल्डर भन्नेहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पाएको सफलता जोगाउन सकिरहेको देखिंदैन । कप्तान पारस खड्काले खेलाडीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको बताए । अब खेलाडीसँगै क्रिकेट पदाधिकारी र देशमाथि नै जिम्मेवारी छ कि क्रिकेटलाई कसरी हेर्ने ? भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् । कप्तान खड्काको यो प्रश्न नयाँ भने होइन । क्रिकेट सुधारका लागि खड्काले यस्ता कुरा त कयौं पटक भनेका छन् । तर,खै किन हो सम्बन्धित निकाय मौन छ ।
क्रिकेटमा भएको लगानी, खेल मैदान, युवापुस्ताको क्रिकेटप्रतिको आकषर्ण बढ्दो भए पनि उचित पूर्वाधारविना क्रिकेट विकासको अबको बाटो कठिन छ । क्रिकेटको चर्चा पनि मौसरी हुने गरेको देखिन्छ । किनकी हाम्रा खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिस्तरको खेल जितेको बेलामा क्रिकेटको चर्चा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिस्तरको खेल सधैं हुँदैन । खेल सधैं जितिन्छ भन्ने पनि छैन् । तर, जितेर मुलुकको शिर उच्च बनाउँदा भने सबैलाई हर्षित बनाउँछ । इतिहासमा त्यस्ता क्षणहरू बिरलै आउँछन्, जसले सिंगो देशलाई नै उमंग, उत्साह र खुसीको माहोलमा पु¥याउँछ । विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ प्रायःसबै खेलमा नेपाली टोलीले शानदार प्रदर्शन ग¥यो । खेलाडीहरू पारस खड्का, सन्दीप लामिछमने, करण केसी, वसन्त रेग्मी चर्चाको शिखरमा चुलिए । यस अघि पनि बंगलादेशमा सम्पन्न ट्वान्टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा नेपालका खेलाडीहरूले देखाएको शानदार प्रदर्शनपछि देश नै खुसी थियो । उत्कृष्ट सफलता प्राप्तिसँगै खेलाडीहरू पनि एकाएक ‘राष्ट्रिय हिरो’ बन्न पुगेका थिए । साथै, बंगलादेशबाट बटुलेर ल्याएको सफलता नेपाली दर्शक र शुभेच्छुकहरूसामु बाँड्न खेलाडीहरू पनि अत्यन्तै उत्साहित र लालायित देखिएका थिए । खेलाडीहरूलाई राष्ट्र र जनताले अपार माया, स्नेह र सद्भाव अर्पण गरेका थिए । त्यतिखेरको जस्तै खुसी अहिले फेरि दोहोरिएको छ । क्रिकेटको माध्यमद्वारा नेपालको नाम चम्किनु गौरवको विषय हो ।
कुनै पनि कुरामा सफलता प्राप्त गर्नु जति कठिन हुन्छ, त्योभन्दा बढी उक्त सफलतालाई जोगाइराख्न कठिन हुन्छ । नेपाली क्रिकेटले एकपछि अर्को जित हासिल गरेर सफलताको जुन उचाई प्राप्त गरेको छ, त्यसलाई जोगाइराख्ने ठूलो टिमसामु सधैं जिम्मेवारी र चुनौती छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा भाग लिइरहेको अहिलेको पुस्ताले जुन क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको छ, अब भावी पुस्तालाई पनि त्यही अनुपातमा क्षमतावान् बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको देखिन्छ । कुनै एक खेलमा सफलता हात पारियो भन्दै दङ्ग परेर बस्ने बेला छैन् । समयक्रमसँगै यही स्तरको खेल खेल्न हामीलाई नयाँ–नयाँ क्षमतावान् खेलाडीको आवश्यकता पर्दछ । क्रिकेटले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्दै जाँदा दुःखद् पक्ष चैं के छ भने, सरकारले खेलको मर्म नै बुझेको छैन जस्तो लाग्छ । विकासका लागि जसरी दीर्घकालीन योजना र रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेको देखिदैन् । न्यून बजेट, सीमित साधन स्रोत र पूर्वाधारका विकासबिनै क्रिकेटले सफलता पाएको सत्य हो । अभाव र अपुगको अवस्थामा सफल बन्दै गरेको क्रिकेटले पर्याप्त साधनस्रोत, त्यसैअनुरूपको पूर्वाधार विकास प्राप्त गर्ने हो भने यो खेलमार्फत नेपालको प्रतिष्ठा बढ्नेमा दुई मत छैन् । तर सरकारले यसतर्फ आवश्यक गाम्भीर्य देखाउन सकेको भने देखिदैन ।
मुलुकमा क्रिकेटका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने, बढीभन्दा बढी घरेलु प्रतियोगिता गर्ने, क्रिकेट प्रशिक्षण केन्द्रहरू खोल्ने, यसका लागि आवश्यक साधनस्रोतको कन्जुस्याइँ नगरी व्यवस्था गर्ने, पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने गर्नुपर्छ । हुन त पहिलेको तुलनामा नेपाली क्रिकेट टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय खेल जित्न थालेपछि सरकारले खेलाडीको हौसला बढाउन बढाउने कार्य नगरेको पनि होइन । यसो गर्दा खेलाडीहरू खेलप्रति उत्साहित हुन्छन् । मनोबल बढ्छ । तर क्रिकेटलाई दीर्घकालीन रूपमा विकास गर्ने र अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै यसको स्तर अझै उकास्नमा भने यत्तिले पुग्दैन । त्यसका लागि सातै प्रदेशमा क्रिकेट स्टेडियमहरू बनाउने र घरेलु प्रतियोगिता गर्दा राम्रो हुन्छ । वर्षभरिमा मुलुकभित्र क्रिकेटका घरेलु प्रतियोगिता करिव दुई महिना मात्रै हुन्छन् । फुटबलमा भने झन्डै नौ महिना घरेलु प्रतियोगिता हुने गरेको देखिन्छ । क्रिकेटमा पनि धरै प्रतियोगिताको गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म क्रिकेटमा नेपालले जति सफलता प्राप्त गरेको छ त्यो सबै खेलाडी र प्रशिक्षकको मेहनतले हो । सफलतालाई निरन्तरता दिन सधैं यिनै खेलाडी र प्रशिक्षक हुँदैनन् । तर सफलता प्राप्त गर्ने उदाहरण भने टिमले बनाएको छ ।
अब त्यसलाई निरन्तरता दिन क्रिकेटलाई बलियो बनाउन पर्छ, राज्यले त्यसैअनुसारको लगानी र प्राथमिकता दियो भने अहिले पाएको सफलताले स्थायित्व पाउन सक्ने छ । घरेलु प्रतियोगिता नहुने हो भने खेलाडीले खेल्न पाउँदैनन् । राम्रो खेलाडी तयार हुन उसले खेल्न पाउनुपर्छ । खेल्ने वातावरण हुनुपर्छ । यसमा खेलाडीको आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । त्यसैले व्यवसायिक क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुनुपर्छ । लगातार खेलिरहँदा खेलाडीहरू सधै ‘लय’ र ‘फिट’कम रहने सम्भावना भइरहन्छ । दुई खेल खेलेको भरमा खेलाडीको लय र फिटनेस जाँच हुँदैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ खेलाडीले टोलीमा ठाउँ पाउने सम्भावना पनि रहँदैन । नराम्रो खेल्ने खेलाडी टोलीबाट विस्थापित पनि हुँदैनन् । यो सबै दिने भनेको घरेलु प्रतियोगिताले हो । नेपालजस्तो एसोसिएट देशमा कम्तीमा हरेक वर्ष एउटा खेलाडीले घरेलु क्रिकेटमा ३५ भन्दा बढी खेल खेल्नुपर्छ । यसका लागि क्रिकेटका सरोकारवाला निकायले योजनाबद्ध रूपमा क्रिकेटलाई विकास गर्नुपर्छ ।
नेपाली क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय सम्भावना ठूलो छ । विश्वका शीर्ष १५–२० टोलीको सूचीमा हामी पनि पर्छौं । यो खुसीको कुरा हो । क्रिकेटमात्र नेपालको यस्तो खेल हो जसको यू–१९ विश्वकप ६–७ पटक खेलेको छ, यु–१९ एसिया कप खेलेको छ । नेपालमा क्रिकेटको क्रेज टेस्ट राष्ट्रकै हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । क्रिकेटका महारथीहरू भनिने भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशको नजिक भएर पनि हुन सक्छ । क्रिकेटको दर्शक आधारका कारण ठूला प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न सक्छ । अन्तरदेशीय खेलहरू आयोजनाका लागि नेपाल सन्तुलित दर्शक बन्न सक्छन् । त्यसैले नेपाल क्रिकेटको ठूलो बजार बन्न सक्छ । क्रिकेटलाई हामीले नेपालको ब्रान्ड बनाउन सक्छौं । यसका लागि नेपाली क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रियस्तर अझ माथि पु¥याउनुपर्ने चुनौती भने छ ।
क्रिकेट विकासमा सहयोग गर्ने खालका स्कुल क्रिकेट, विश्वविद्यालय क्रिकेट, राष्ट्रिय क्रिकेट, फ्रेन्चाइज क्रिकेटजस्ता प्रतियोगितालाई योजनाबद्धरूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । जसले गर्दा नयाँ र राम्रा खेलाडीहरुको उत्पादन हुन्छ । क्रिकेट एकेडेमी पनि बनाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय टिमका खेलाडी प्रदिप ऐरी, भुवन कार्कीलगायतले सञ्चालन गरेको हिमालयन क्रिकेट एकेडेमी जस्तै हुने हो भने केटाकेटी क्रिकेट सिक्छन् र नयाँ प्रतिभा उत्पादन हुन्छन् । एकेडेमीको उद्देश्य नै क्रिकेटको विकास गर्ने हो । क्रिकेट एकेडेमी खुल्दै जाने, अनुभवी खेलाडी तथा कोचले सिकाउँदै जाने र सरकारले पनि त्यही अनुसारको लगानी गर्ने हो भने क्रिकेटको भविष्य सुन्दर छ । घरेलु क्रिकेटको राम्रो जग बसाल्नु सक्ने हो भने अगाडिको यात्रा सहज हुन्छ ।
प्रकाशित १0 चैत्र २0७४ , शनिबार | 2018-03-24 02:02:45
भारत पाँचौ पटक महिला साफ च्याम्पियनसिप
काठमाडौं । पाँचौं महिला साफ च्याम्पियनको उपाधि भारतले जितेको छ । शुक्रबार विराटनरगरमा भएको फाइनल खेलमा नेपाल भारतसँग १–३ गोलले